को हुन रोल्पाका खड्गबहादुर पुन ‘खबपु चञ्चल ? - Himali Patrika
को हुन रोल्पाका खड्गबहादुर पुन ‘खबपु चञ्चल ?
हिमाली पत्रिका २ चैत्र २०७६, 9:19 am
रोल्पा । जनयुद्धको केन्द्रको पहिचान बनाएको रोल्पाका केहीं युवा छन्, जसले रोल्पालाई कला संगीतको क्षेत्रबाट पनि स्थापित गरिरहेका छन् । केही महिनाअघि सम्पन्न आइएमई नेपाल लोकस्टारको उपाधि जितेर शनी विश्वकर्माले लोक गीत संगीतबाट रोल्पालाई चिनाए । राष्ट्रियस्तरको कुनै पनि रियालिटी शोको उपाधि जित्ने शनी रोल्पाकै पहिलो हुन् ।
उनीपछि रोल्पाका खड्गबहादुर पुन ‘खबपु चञ्चल’ कान्तिपुर टेलिभिजनबाट प्रशारण भइरहेको हाँस्यव्यङ्ग्य रियालिटी शो कमेडी च्याम्पियनमा धमकेदार प्रस्तुती दिइएर देश विदेशमा नाम आफुलाई परिचित गराएका छन्।
खबपु कमेडी च्याम्पियनशिप कार्यक्रम अर्गानिक कमेडियनको रुपमा स्थापित रहे । कमेडी च्याम्पियनको उत्कृष्ट तीन प्रतिस्पर्धी पुन जनयुद्धमा सबैभन्दा मा नवीय क्ष ति व्यहोरेको जेलबाङका हुन् । राज्य र वि द्रोही पक्षबाट गरी उनको गाउँ जेलबाङका ७३ जना मानिस विभिन्न ठाउँमा मा रिएका थिए ।
शारीरिक रुपमा उनको उचाइ कम छ । मान्छे चञ्चल देखिन्छन् । कमेडी च्याम्पियन सिजन–१ बाट उनी पहिलै बाहिरिसकेका थिए तर , निर्णायकको छनौट र दर्शकको भोटका कारण उनी कमेडी च्याम्पियनमा ‘रि इन्ट्री’ मात्रै गरेनन्, शीर्ष तीनमा पुगेर उपाधिको दाबेदार समेत बने।
पुन उत्कृष्ट २४ बाट बाहिरिएका थिए । उत्कृष्ट ७ का लागि बाहिरिसकेका १० जनालाई वाइल्ड कार्ड इन्ट्रीका लागि प्रस्तुतीको अवसर मिल्यो । ती १० मध्ये सुमन कोइराला निर्णायकको छनौटमा परेर र खड्गबहादुर पुन दर्शकको भोटबाट उत्कृष्ट ७ मा प्रवेश गरे ।
पुनले प्रायः रोल्पा र माओवादी जनयुद्धलाई विषय बनाएर आफ्नो प्रस्तुती दिइरहेका थिए । उत्कृष्ट ४ का लागि उनले जनयुद्धकै विषयलाई लिएर प्रस्तुती दिएका थिए । सो प्रस्तुतीबाट उनी परफरमर अफ द राउण्ड बनेका बने ।
दोहोरी साँझदेखि स्कूलसम्म
२९ वर्षीय पुन तीन वर्षअघि काठमाडौं छिरेका हुन् । त्यसअघि उनी रोल्पाका साहित्यिक र सांगीतिक क्षेत्रमा सक्रिय थिए । उनी दुईपटक राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी प्रतिष्ठान रोल्पा शाखाको अध्यक्ष बने । आफैले स्थापना गरेको सुनछहरी कला केन्द्रको महासचिव छन् । उनी राप्ती साहित्य परिषद् र ललित साहित्य परिषद्को आजीवन सदस्य पनि छन् । उनी अथार मगराँत कलाकार संघको समेत महासचिव छन् ।
काठमाडौं छिरेपछि उनले राष्ट्रिय नाचघरमा छ महिना अभिनय र छ महिना नृत्य सिके । त्यसपछि उनले बिहान स्कूलमा नृत्य सिकाउन थाले र राती दोहोरी साँझमा काम गर्न थाले । ‘स्कूलमा म कल्चरल म्यूजिक सिकाउँछु, मैले ६/७ वटा प्राइभेट स्कूलमा सिकाएँ’ उनले भने, ‘साँझमा दोहोरी साँझमा काम गर्छु ।’ उनले पछिल्लो समय स्कूलमा म्यूजिक सिकाउन छाडेको बताए ।
धादिङका हिमेस पन्तले ‘कमेडी चेम्पियन’को उपाधि चुमेपछी खबपुका समर्थक निराश भएका छन् । नेपालकै पहिलो स्ट्यान्ड–अप कमेडी रियालिटी सो ‘कमेडी च्याम्पियन’मा पन्तले दुई जना प्रतिस्पर्धीलाई पछि पार्दै कमेडी चेम्पियनको उपाधि हात पारेपछि खबपुका समर्थकले भोटिंग नतिजा सार्बजानिक गर्न माग गरेका हुन् । खबपुका समर्थकले विरोध गरेपछि कमेडी च्याम्पियनका जज सन्तोष पन्तले हिमेशले १० लाख भन्दा धेरै भोटले जितेको बताएका थिए।